Ụlọ Akwụkwọ Gilied. Ọ dị na Patasịn
Ì nwere ike ịhapụ ndị ikwu gị gaa mba ọzọ ikwusa ozi ọma? Puku kwuru puku Ndịàmà Jehova na-eme otú ahụ. Ihe a ha na-eme yiri ihe ahụ Aịzaya onye amụma mere mgbe Jehova ziri ya ozi. Ọ sịrị: “Lee m! Ziga m.” (Aịzaya 6:8) Ha sikwa otú ahụ na-eme ihe Jizọs Kraịst mere. Ị manụ na Kraịst hapụrụ eluigwe bịa n’ụwa ikwusa ozi ọma Alaeze Chineke. N’ihi ya, e nwere ike ịsị na Jizọs bụ Onye Ozi Ala Ọzọ kacha ndị ozi ala ọzọ niile.—Jọn 7:29.
Ọ bụ onye na-eme ka Jizọs. Chineke zitere Jizọs n’ụwa ka ọ bịa soro ndị mmehie biri. Mgbe ọ bịara, ọ hụrụ na ndị mmadụ na-ekpe ikpe na-ezighị ezi. Ma, ọ gaghị chọwa otú ọ ga-esi mee ka ihe niile gaziwe agazi. Kama, o lekwasịrị anya n’ozi ọma ọ bịara ikwusa n’ụwa. Ọ ma na ọ bụ naanị Alaeze ahụ ga-egboro ụmụ mmadụ mkpa ha. (Luk 4:43) Ndịàmà Jehova, ndị a na-eziga ka ha gaa kwusaa ozi ọma n’ala ọzọ, na-eme otú ahụ Jizọs mere.
Ọ bụ onye na-ekwo maka ozi ọma eme ihe ndị ọ na-agaraghị eme. Onye ozi ala ọzọ ga-adị njikere ịga ebe omenala ha dị iche na nke obodo ya. E nwekwara ike, ụdị nri a na-eri n’obodo ha na ụdị ihe ndị dị n’obodo ha agaghị adị n’ebe ahụ a chọrọ iziga ya. N’agbanyeghị ihe a niile, ọ ga-ekweta ịga. Mgbe ụfọdụ, onye ozi ala ọzọ na-amụ asụsụ ndị ahụ ọ nọ n’obodo ha, ka o nwee ike iji ya na-ezi ha ozi ọma. E nweekwa ihe ọ bụla ndị ebe ahụ ji aga njem, ọ bụ ya ka ọ ga-eji na-aga ozi ọma ma ọ bụrụ na ọ gaghị ejili ụkwụ aga ebe dị anya. Ka onye ozi ala ọzọ nwee ike ime ihe a niile, ọ ga-ahụrịrị ndị ọ gara obodo ha n’anya.
A na-enye ndị na-aga ya ezigbote ọzụzụ. Ọtụtụ n’ime ndị ozi ala ọzọ na-aga Ụlọ Akwụkwọ Gilied, bụ́ ebe a na-anọ enye ha ọzụzụ na-ewe ọnwa ise. Ihe ha na-amụ n’ụlọ akwụkwọ ahụ na-eme ka okwukwe ha nwere na Jehova sikwuo ike. Ọ na-emekwa ka ha tụkwasị Baịbụl na ọgbakọ Jehova obi. (Ilu 3:5, 6) A na-akụzikwara ha ụdị àgwà ha kwesịrị ịna-akpa, ka ha nwee ike ịbụ ezigbo ndị ozi ala ọzọ. Ha na-amụkwa otú ha ga-esi na-akụziri ndị mmadụ Baịbụl nke ọma. Ha gụchaa akwụkwọ n’ebe ahụ, obi na-esizi ha ike izisa ozi ọma “n’ebe kasị anya n’ụwa.”—Ọrụ Ndịozi 1:8.
Olee ụlọ akwụkwọ pụrụ iche Ndịàmà Jehova chọrọ ịga ozi ala ọzọ na-aga?
ỤLỌ AKWỤKWỌ GILIED ABAALA EZIGBO URU
Gilied bụ okwu Hibru. A sụgharịa ya, ọ pụtara “Nnukwute Ihe Àmà.” Kemgbe afọ 1943, ihe karịrị puku mmadụ asatọ gụrụla akwụkwọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied agbaala nnukwute àmà n’ihe dị ka narị ala abụọ. Àmà ndị ha gbara rụpụtakwara ọtụtụ ihe ọma. Dị ka ihe atụ, o nweghị ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị na Peruu mgbe mbụ e zigara ndị ozi ala ọzọ ebe ahụ. Ma ugbu a, e nweela otu puku ọgbakọ na narị abụọ na iri ise na ise. Mgbe mbụ ndị ozi ala ọzọ rutere Japan, Ndịàmà Jehova erughị mmadụ iri n’ebe ahụ. Ma ugbu a, ha akarịala narị puku abụọ.